Shirkadda isgaarsiinta Goolis oo maanta xaflad nasiib-tijaabin ah ku bixisay baabuur iyo agab kale oo badan. – Radio Daljir
Shirkadda isgaarsiinta Goolis oo maanta xaflad nasiib-tijaabin ah ku bixisay baabuur iyo agab kale oo badan.
Agoosto 15, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 15 – Shirkadda isgaarsiinta ee Golis ayaa maanta magaalada Galkacyo ku qabatay xaflad ballaaran oo bakhti-yaanasiib ah taasoo ay macaamiisheeda iyo dadweynaha reer Galkacyo-ba hadiyado kala duwan ugu qoondaysay, marti sharaf badanna ay ka qayb-galeen.
Shirkadda ayaa soo bandhigtay hadiyado ay ka midyihiin baabuur, Laptop, dahab, mobeyllo iyo agab kale oo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin TV-yo iyo qalab kale oo xagga guryaha iyo meheradaha loo adeegsado.
Hadiyadda 1-aad oo ahayd baabuur Bas ah ayaa waxaa ku guulaysatay gabar lagu magacaabo Faadumo Maxamuud Ciise kaddib markii warqado badan oo ay ka qaybgalayaasha tartarku isku diiwaan-galiyeen uu mid ka soo saaray Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo lagu sharfay soo bixinta hadiyadda koowaad oo ahayd baabuurka gabadhu heshay.
Hadiyadda 2-aad ee ay shirkaddu Bakhti-yaanasiibka u qoondaysay ayaa ahayd computer Laptop ah kaasoo ay ku guulaysatay gabar kale iyana lagu magacano Sacdiyo Maxamuud, kaddib markii waraqddii labaadna uu soo bixiyey duqii hore ee degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Maxamuud X Xasan.
Hadiyadii 3-aad ee shirkaddu qoondaysayna oo ahayd xaddid dahab ah iyana waxaa ku guulaysatay gabar kale oo lagu magacaabo Maryan Maxamuud Guuleed Cadde, waxaana iyaduna hadiyaddaasi ay heshay kaddib markii warqaddii saddexaad ay santuukha ka soo saartay Faadumo Geesdheer oo ah isku-duwaha gobolka Mudug ee wasaradda haweenka iyo hormarinta arrimaha qooyska Puntland.
Dhinaca kale hadiyadaha maanta lagu guulaystay waxaa ka mid ahaa, moobeyllo, qasaaaldaha dhar, rikooro, marwaxadaha la isku qaboojiyo iyo sidoo kale katabaannada dharka la surto kuwaasi oo macaamiil kala duwan oo wadata moobeyllada shirkadda ay ku kala guulaysteen.
Waa markii labaad oo shirakadda isgaasiinta ee Goolis ay qabato bandhig noocaan oo kale ah ayna ku bixiso hadiyado kala duwan, waxaan sannadkii hore ee 2010 xaflad tan oo kale ah ay shirkaddu ku qabatay magaalada Bossaso, waxaana sida maanta oo kale hadiyadda baabuurka ku guulaysatay gabar ku sugnayd magaalada Garoowe.
Xafaladda maanta ay qabatay shirkaddu ee nasiib-tijaabinta waaa ay ka duwanayd middii sannadkii tagay, waxaana loo soo bandhigay oo kaliya sannadkaan moobeyllada ku adeegaya anteennada magaalada Galkacyo ee Goolis, halka sannadkii hore ay ka ahayd telefoonnada Golis oo dhan.